फूलचोकीमा चरा हेर्दै बीसीएनको स्थापना दिवस मनाइयो – Highlights Tourism
फूलचोकीमा चरा हेर्दै बीसीएनको स्थापना दिवस मनाइयो
चार दशकदेखि चरा संरक्षणको काम गर्दै आएको नेपाल पंछी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले आफ्नो ४० औं स्थापना दिवस मनाएको छ । बीसीएनले आफ्नो स्थापना दिवसमा फूलचोकी वन क्षेत्रमा पाइने चराहरुको अवलोकन गरेर २४ अप्रिलको दिन मनाएको हो ।
फूलचोकी वन क्षेत्रलाई चरा अवलोकनका लागि “हट स्पट” मानिन्छ । नेपालमा चरा संरक्षणको काम प्राणीशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको समूहले गठन गरेको “बर्ड वाचिङ क्लब” बाट शुरुवात भएको हो । पछि त्यही क्बल नेपाल पंछी संरक्षण संघ (बिसीएन) को रुप लिएको हो ।
नेपाल पंछी विविधताको धनी रहेको छ । यहाँ ८ सय ८९ प्रजातिका चरा पाइन्छन् भने फुलचोकी वन क्षेत्रमा मात्र तीन सय भन्दा बढी प्रजातिका चरा रहेको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्लो समयमा फूलचोकी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यहरु भइरहेको छ भने केवलकारलगायतका संरचनाहरु निर्माणको तयारीले चरालगायत त्यहाँको जैविक विविधतालाई असर पार्ने देखिएको छ ।
मुलुककै राजधानी काठमाडौंबाट नजिकैको स्थानमा रहेको फूलचोकी चरा विविधताको लागि महत्वपूर्ण स्थान हो । त्यसलै बिभिन्न निर्माणले हुन सक्ने असरका बारेमा चेतना जगाउने उदेश्यले पनि बिसीएनले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा फूलचोकीमा कार्यक्रम गरेको बताउँछन्, बीसीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापा बताउँछिन् ।
चरा चुरुङ्गीहरु स्वच्छ वातावरणको लागि महत्वपूर्ण जीव हुन् । किसानहरुको लागि त झनै महत्वपूर्ण रहेको छ । चराहरुले बालीनालीलाई क्षति पुयाउने किरा फट्याङ्ग्राहरुलाई खाइदिने हुँदा किसानको साथी बनेको हो ।
त्यसैगरेर नेपाल चरा पर्यटनका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । नियमित रुपमा हुने हाइकिङ ट्रेकिङ भन्दा पनि चराका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसलाई हेरेर मनोरञ्जन लिनेहरु लामो समयका लागि हुने गर्दछ । चरा पर्यटनमा संलग्न धेरै मानिसहरु धनी तथा अवकास प्राप्त हुने हुँदा उनीहरुसँग पैसा र समय दुवै हुने हुँदा लक्जरी पर्यटकको रुपमा लिइन्छ ।
”चराहरु वातावरण स्वच्छा रहेको सूचक हो । चरा धेरै हुने स्थान स्वच्छा वातावरण भएको क्षेत्र भनेर बुझ्न सकिन्छ” बर्ड लाइफ इन्टरनेशनलका परामर्शदाता डा. हुम गुरुङ भन्छन्, ”नेपालमा पाइने चराको विविधताका कारण चरा पर्यटनको उच्च संभावना छ ।”
बीसीएन सदस्यतामा आधारित संस्था हो । यसमा चरा तथा प्रकृतिलाई माया गर्ने मान्छेहरु सदस्य बन्ने गर्दछन् । यसले महिनाको दुई शनिबार काठमाडौंको वरिपरि शिवपुरी, नागर्जुन, फूलचोकीलगायतका चराका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा चरा अवलोकनको काम गर्ने गर्दछ । त्यसमा सदस्यहरु र सदस्य नभएकाहरु जो कोही पनि सहभागी हुन सकिन्छ भने यसरी चरा अवलोकनमा संलग्नहरुले त्यसपछि सदस्य बन्ने गरेको बताइन्छ ।
भारतीय पत्रकार तथा फिल्म मेकर निलिमा बालार्गी पनि आइतवारको फूल्चोकी चरा अवलोकन कार्यक्रममा सहभागी थिइन् । उनले लामो समयपछि नेपालमा यसरी चरा अवलोकनमा सहभागी हुन पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।
त्यसै गरेर नेपालमा रिसर्च असिस्टेन्टको रुपमा काम गरिरहेका बेलायती नागरिक जोन गिब्सनले आफु सानै देखि चरा अवलोकन गर्दै हुर्किएको उल्लेख गर्दै बिसीएनले कार्यक्रम गर्दै छ भनेर थाहा पाएर आएको र आफुले रमाइलो महशुस गरेको बताए ।
चरा विज्ञ डा.हेमबहादुर कटवालले फूलचोकी क्षेत्रमा १२ वर्षदेखि चरा हेर्न आइरहेको बताए । पछिल्लो समयमा यहाँ केवलकार लगायतका धेरै थरी निर्माणको कुरा भइरहेको छ । त्यसले यहाँको चराको बासस्थानलाई असर पार्ने देखिएको छ ।
फूलचोकीमा मुनाललगायतका उच्च हिमाली भागमा देखिने चरा पनि देखिन्छन् । यहाँ अरु ठाउँमा भन्दा धेरै चरा देखिने हुँदा यस ठाउँलाई संरक्षणको आवश्यकता छ । यहाँ नेपालीहरु मात्र होइन, विदेशीहरु पनि चरा अवलोकनको लागि आउँछन् ।
फूलचोकी काठमाडौंबाट नजिकै धेरै चराहरु देखिने क्षेत्र हो । यो स्थानमा बाटैबाट नाङ्गो आँखाले पनि चरा हेर्न सकिन्छ । यहाँ धेरै अध्ययनहरु पनि भएको उल्लेख गर्दै बीसीएन प्रा. करन बहादुर शाह भन्छन्, ”यो क्षेत्रमा चरा मात्र होइन वन्य जन्तुहरु पनि देखिन्छन् ।”
चरा अवलोकनमा पछिल्लो समय विद्यार्थी तथा नयाँ पुस्ताको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । उनीहरुले चराबाट हुने बातावरणीयलगायतका अन्य फाइदाहरुका बारेमा पनि बुझ्दै गएका छन् ।
फोटो: भूमि थारु, निकित प्रधान र मोहनबिक्रम शाह ।
Previous article साउदीमा ध्वजाबाहक पुग्दा नेपालीमा झल्किएको खुसी
Next article बिहीबारदेखि आन्तरिक उडान १८ घण्टा : यस्तो छ एयरलाइन्सको तयारी